Alshabab oo Sadax Jeer la Xiray ayaa loo Magacabay Taliyaha Ciidamada Hubeysan ee NISA
20 July, 2018 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Hey`ada NISA ayaa markan si toosa faraqa ugu gashay Amniyaadka Alshabaab iyadoo sirdoonka Alshabaab suuragaliyeen in Cumar Macow oo tiro sadax jeer ah la xiray kadib markii lagu eedeeyey Qaraxyo kala danbeeyey laga dhigo Taliyaha Ciidamada labisan
Hey`ada NISA ayaa markan si toosa faraqa ugu gashay Amniyaadka Alshabaab iyadoo sirdoonka Alshabaab suuragaliyeen in Cumar Macow oo tiro sadax jeer ah la xiray kadib markii lagu eedeeyey Qaraxyo kala danbeeyey laga dhigo Taliyaha Ciidamada labisan ee Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.
Isha dahsoon ee Maqaamka ayaa markaliya ku baraarugay qatartan ay maleegeen cadowga umada Soomaaliyeed ee Alshabaab iyadoo horey ay shabaab ugu guuleysteen markii ugu horeysay Taariikhda in ay xidido muuqda ay ku yeeshan Hey`ada NISA taasoo aheyd marki uu xil ka qabtay Madaxii hore ee Amniyaadka Alshabab Sakariye Ismaciil.
Goorma ayey aheyd markii ugu horeysay ee Xukun lagu rido Cumar Macow oo hada noqday Taliyaha?
Cumar Macow, Cumar Shabaab ayaa waxa 5 Sano lagu xukumay marki uu Madaxweynaha ahaa Shiikh Shariif iyadoo xiligaa uu xukumayey NISA Axmed Macalin Fiqi oo hada ah Xilibaan ka tirsan Barlamaanka Soomaliya.
Cumar ayaa lagu soo eedeeyey in uu ka danbeeyo Qarixii lagu weeraray Madaxtooyada lagana soo galay dhanka 15 May iyadoo marka uu ku geeriyooday Jenaral Shirbow oo ka mid ahaa Saraakiisha NISA iyo dad kale, waxaase xukunkaa ka furdaamiyey Sirdoonka Alshabaab oo qarash iyo xirfad kale uga sii daayey Xabsiga.
Xiligii Xasan Shiikh Madaxweynaha ahaa ayaa hadana mar kale la xiray labo jeer iyadoo markaa loo heysto labo Qarax kuwaa oo kala ah Qarixii ka dhacay Banaanka Hotel SYL xiligaas oo uu wadanka imanayey Madaxweynaha Turiga Mudane Erdogan, sidoo kale Qarixii ka dhacay Hotel Makka Almukarama iyo midkii Hotel Central.
Cumar AlShabaab labadaas xarig kadib Dowladii markaa jirtay waxa ay ka saartay guud ahaan in uu la shaqeeyo Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka waxaana markaa soo dhawaa doorashada sanadii 2016, Cumarna magaalada ayuu horey usii galay.
Halkuu NISA kasoo galay Cumar Macow, Cumar Alshabaab?
Cumar wuxuu ahaan jiray Xisbu islaam kadibna waxa uu ku biiray Alshabaab isagoo markii danbe usoo wareegay dhanka Dowlada oo uu markaa ku yimid in xogo uu ka siiyo Alshabaab sidaa ayuuna kula shaqeyn jiray Nabadsugida.
Cumar Macow ayaa ah shaqsi si aad ah looga yaqaan Hoteelada Muqdisho oo la isku sheego marka uu hoteelka soo booqdo lana dareemo cabsi ah in ay suuragal tahay in uu kusoo fooleeyahay qarax lagu hoobto.
Cumar Macow oo hada loo magacaabay Taliyaha Cidamada Labisan ee NISA ayaa noqoneysa talaabo muujineysa in Shabaab Sirdoonkooda ay ku guuleysteen halkii looga duuli jiray ee ay ka harsan waayeen in ay gacanta ku dhigeen ayna tahay in ay markan ka taqalusaan Ciidamadii iyo Saraakiishii ay ka hoyan waayeen iyagoo adeegsanaya awooda Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee ay Xukumaan halka Maaxweyne Famaajo uusanba waxba kala socon shaqada socota